काेराेनाकालमा महानगरको लुट-२ : राहतमा ५ करोड ७० लाख खर्च,मापदण्ड छैन – Enepali Samchar
काेराेनाकालमा महानगरको लुट-२ : राहतमा ५ करोड ७० लाख खर्च,मापदण्ड छैन
January 29, 2021 adminLeaveaComment on काेराेनाकालमा महानगरको लुट-२ : राहतमा ५ करोड ७० लाख खर्च,मापदण्ड छैन
काठमाडौँ : कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले राहत शीर्षकमा ३२ वटा वडा मार्फत पाँच करोड ७० लाख रुपैंयाको खर्च गरेको खुलेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि एउटा आइसोलेसन समेत नबनाएको महानगरले वडा मार्फत खर्च गरेको ९० प्रतिशत रकम राहत शीर्षकमा राखेको छ। जबकी काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन लगाएपछि अधिकांश स्थानमा स्वयंसेवीहरूले राहत वितरण गरेका थिए। लकडाउनको अवधिमा काम खोसिएर बेरोजगार भएकाहरूलाई खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउँदा महानगरले फोहोर गरेको भन्दै हटाएको थियो। न्यून आर्थिक स्रोत भएका महानगरवासीलाई सघाउन महानगरको नेतृत्व कतै देखिएको थिएन।
प्राय सबै वडा अध्यक्षहरूले उकेरासँग महानगरपालिकाले दिएको रकम राहतमा खर्च गरेको दाबी गरे पनि राहत वितरणको मापदण्ड, राहत पाउने सङ्ख्या अनि प्रति परिवार वा व्यक्ति खर्च गरिएको रकम विवरण भने खुलाउन सकेनन्। प्रायले राहत बाँडेको भन्दै दाल, चामल र तेलकै नाम लिए।
कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय निकायले खर्च गरेको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै अनियमितता राहत शीर्षकमा देखिएको थियो। महानगर र वडाले राहत शीर्षकमा खर्च गरेको रकम र कोरोना कालमा देखिएको निस्कृयताले राहत शीर्षकमा भएको खर्च शङ्कामा रह्यो।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर उकेराले प्राप्त गरेको आर्थिक विवरणमा उल्लेख भए अनुसार उसले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३२ वटा वडालाई ६ करोड २९ लाख ९८ हजार निकासा गरेको थियो। त्यसमा ५ करोड ७० लाख त राहत वितरण शीर्षकमै खर्च भएको छ।
वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष दीपक केसीले पहिलो लटमा वडालाई पठाएको ९५ प्रतिशत रकम राहतमा नै खर्च भएको दाबी गरे। महानगरबाट प्राप्त विवरण अनुसार वडा नम्बर तीनले पहिलो लटमा ३६ लाख ५२ हजार राहत शीर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ।
केसीका अनुसार दोस्रो लटमा आएको २ लाख ५० हजार रुपैंया मात्र बाँकी छ । बाँकी सबै राहतमा गयो। राहतमा चामल, दाल, नुन र तेल लिन आउने सबैलाई वितरण गरिएको उनको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बाँकी ५९ लाख ८७ हजार मास्क स्यानिटाइजर किन्न खर्च गरेको देखियो। आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रत्येक वडाले पाएको दुई लाख ५० हजार के मा खर्च भयो विवरणमा उल्लेख छैन।
सबैभन्दा धेरै खर्च ३२ वडामा
काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सबै भन्दा धेरै रकम खर्च गर्ने वडा हो ३२ । उसले ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ मध्ये पहिलो लटमा ४० लाख ७५ हजारमा ४१ लाख ९ हजार खर्च गरेको थियो । यो वडामा हालसम्म ३ हजार ५१ जना कोरोना सङ्क्रमित भए।वडा नम्बर ७ धेरै रकम खर्च गर्नेमा दोस्रो नम्बरमा पर्छ। ४२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको वडाले २ लाख ५० हजार बाहेक बाँकी रकम सबै राहत वितरणमा खर्च भएको दाबी गरेको छ।वडा अध्यक्ष शुद्ध डगोंलका अनुसार पहिलो लटमा पठाएको रकम राहत वितरणमा खर्च गरिएको दाबी गर्छन्।‘हाम्रोमा आएको रकम राहत वितरणमा खर्च गरेका हौँ,’डगोंलले भने ‘सङ्क्रमितलाई भन्दा पनि कोही भोकै नपरुन् भन्ने उद्देश्यले महानगरले खर्च गर्न भनेको थियो।’ यो वडामा हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ हजार २ सय ९९ छ। वडा नम्बर ३ धेरै रकम खर्च गर्नेमा पनि तेस्रो नम्बरमै छ। चौथो नम्बरमा रहेको वडा नम्बर ४ मा हालसम्म १ हजार २ सय ९७ कोरोना सङ्क्रमित पुग्यो। सो वडाले ३७ लाख ३९ हजार खर्च गरेको थियो। वडा अध्यक्ष मोहन विष्टको दाबी अनुसार त्यो रकम राहतमै खर्च भयो। कोरोनाकालमा काठमाडौँ महानगरको लुट-१ : साढे २ सयको फेससिल्डको बिल १ हजार
सबैभन्दा धेरै रकम खर्च गर्नेमा पाँचौँ नम्बरमा रहेको वडा २६ ले ३५ लाख ५१ हजार रकममध्ये २ लाख जतिको स्यानिटाइजर र मास्क किनेको र बाँकी रकम राहतमा खर्च गरिएको वडा अध्यक्ष ख्यामलाल तिवारीले दाबी गरे। ७ हजार भन्दा धेरैलाई राहत वितरण गरिएको दाबी गर्ने उनले के के राहत, कहाँ कहाँ बाँडेको भने खुलाएनन्। सङ्क्रमित हेरेर रकम वितरण भएको हैन महानगरपालिकाले रकम वितरण गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिएको देखिएन। सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित वडा नम्बर १६ मा छ । सो वडामा ३ हजार ५९ सङ्क्रमित भए पनि धेरै रकम वडा ३२ ले पाएको थियो। वडा नम्बर १६ ले २१ लाख ८२ हजार पाएको थियो।
काठमाण्डाैँ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाले वडालाई रकम वितरण गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या र विकासको अवस्था हेरेर वितरण गर्ने गरेको थियो। ‘कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै हैन अघिपछि पनि महानगरले तीन वटा मापदण्डलाई मानेर बजेट विनियोजन गर्छ,’ उनले भने ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा रकम वितरण गर्दा पनि यही आधारमा गरिएको हो ।’ ukera बाट
सूर्य थापाले प्रचण्डले भैंसी पूजा गरेको फोटो सेयर गर्दै लेखे यस्तो स्ट्याटस …
यसरी पाउदैछन बैशाख १ गतेबाट कुलमान घिसिङ फेरि नियुक्ति ? सक्दो शेयर गरौँ
११ वर्षपछि बुवाको ह’त्या’रा’ भेट्दा
October 18, 2020 November 1, 2020 admin
थप २९ जनाले पाए बहिर्गमन भिसा, ६० दिनभित्र साउदी छाड्नुपर्ने !
नेपाल-खनाल पक्षका यी प्रभाबसाली नेतालाइ मन्त्री बनाउन ओलिले थाले यस्तो गृहकार्यमा